Las Celdas, Louba Bourgeois ပြပွဲတွင် Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက် | ခရီးသွားသတင်း
Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်မှ Louise Bourgeois ၏ The Cells ပြပွဲ
မော်နီကာဆန် | | ဘေလ်ဘောင်မြို့, ယဉျကြေးမှု
Image - အယ်လန် Finkelman
လူသားတွေဟာရေနွေးငွေ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့၊ အတွင်းထဲသယ်ဆောင်ထားသမျှနဲ့တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖော်ပြနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံပရိသတ်သည်သူ၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများ၊ အခြားသူများမှာမူမသိသောလူများ၊ အခြားသူများစွာသည်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ သူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ်၊ သင့်မေးခွန်းများအတွက်အဖြေကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် မင်းတောင့်တ
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းကြီးစွာသောဖန်တီးမှုများသည်ရှုပ်ထွေးသည့်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်ဘဝ၏ရလဒ်ဖြစ်သည် Louise bourgeois။ ယခုနှင့်စက်တင်ဘာ ၄ ရက်အထိသူ၏အလုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်တွင်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မင်းကိုနားလည်အောင်ကူညီဖို့နဲ့စကားမစပ်၊ မင်းကိုအံ့အားသင့်စေဖို့သူမရဲ့လက်ရာအချို့ကိုပူးတွဲတင်ပြထားပါတယ်။
ပုံ - ရောဘတ် Mapplethorpe
Louise Bourgeois သည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်ပဲရစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်မြို့၌ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူမသည်သြဇာအရှိဆုံးခေတ်သစ်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ရှိသည် အားကြီးသောစိတ်ခံစားမှုတာဝန်ခံ သူမကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းမြင်နိူင်တယ်၊ အရာအားလုံးကြားမှသူမအမြဲတမ်းရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့သူပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ သူကသူမဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပြproblemsနာများနှင့်သူ၏ပန်းပုများ၊ ပန်းချီကားများနှင့်တပ်ဆင်မှုများတွင်ထင်ရှားသောပြforceနာများကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒါ့အပြင် အသက် ၇၀ မှ စ၍ သူ၏ဆဲလ်များကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်.
သူတို့နှင့်အတူသူသည်ခိုင်မာသောသင်္ကေတများဖြင့်တင်ထားသောတံခါးများ၊ ဝါယာကြိုးကွက်များသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောသူရွေ့လျားနိုင်သောဗိသုကာများကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အိမ်သည်ထပ်တလဲလဲပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နေရာအဖြစ်သာမကအကျဉ်းထောင်တစ်ခုကဲ့သို့တင်ပြခဲ့သည်။ သိလိုစိတ်ပြင်းပြမှုအရအမျိုးသမီးများသည်အိမ်နှင့်တူသည်ဟုဆိုရပေမည်။ Bourgeois ငါအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲကိုထောက်ခံခဲ့သည်နှင့်၎င်းသည် ၁၉၄၆ မှ ၄၇ နှစ်အတွင်း၌ပဲရီ၌ပြသခဲ့သည့်သူ၏ပန်းချီကားများ Femmes Maison ၏ထင်ရှားသောအရာဖြစ်သည်။
Image - ပတေရုသ Bellamy
ထို့အပြင်သူသည်လူ့စိတ်ခံစားမှုများကိုများစွာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးဖြစ်စေသည့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သူမအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်နာကျင်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှခံစားမှုကိုမဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့တည်ရှိမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်၎င်းကိုရှောင်ရှားလိုကြသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၎င်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိကြသည်။ အချို့ကဝတ္ထုရေးရန်ရွေးချယ်ကြစဉ်၊ သူတို့သိပ်မကြိုက်သည့်အခြေအနေမျိုးမှရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ထွက်ရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများအားဖြင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကိုခံစားရမည်။ Bourgeois သည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပန်းပုနှင့်ပန်းချီဆွဲရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်.
သူတို့တွေ့မြင်တာကိုသင်နှင့်ခွဲခြားသိမြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့မူရင်းနည်းလမ်းကတော့သင့်ရဲ့စတိုင်ဖြစ်စေ၊ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်စေ…ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အလုပ်မှာကိုယ်ပိုင်အရာဝတ္ထုတွေကိုပါထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ပုံ၊ အက္ခရာ၊ အ ၀ တ်အစား၊ ဒိုင်ယာရီများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သောအနုပညာရှင်လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူမသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကသူမမြင်သမျှ၊ သူမပြောခဲ့သလိုပဲ»ငါမှတ်ဥာဏ်တွေလိုတယ် ငါ့စာရွက်စာတမ်းများ»။ ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သတိရဖို့၊ ထိဖို့၊ ထိဖို့၊ အတိတ်ကသင်ခံစားခဲ့ရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထပ်မံခံစားရန်အတွက်ထိုအချိန်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများကိုပြန်ယူရန်ပိုကောင်းသောနည်းလမ်း။ အကယ်၍ သင်သည်ဆိုးသောအချိန်များကိုကြုံခဲ့ရလျှင်၊ လက်ရှိ၌သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတိတ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းပေမည်။
Image - ခရစ်စတိုဖာ Burke
Las Celdas သည်စက်တင်ဘာ ၄ ရက်အထိ Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်တွင်သင်ပြသနိုင်သည့်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသက် ၇၀ အရွယ်တွင်အနုပညာရှင်ဘဝအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဤဖန်တီးမှုများသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစကြဝuniversာ ၂ ခုကိုတင်ပြသည် - အတွင်းကမ္ဘာနှင့်ပြင်ပလောကတစ်ခုဖြစ်ပြီးပေါင်းစပ်။ ကြည့်ရှုသူအားစိတ်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုခံစားရစေသည်။ ၎င်းသည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြင့်လိုက်ပါသွားလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ Bourgeois ရဲ့အလုပ်ပဲ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်, ပန်းပုကိုယ်နှိုက်၏, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တည်ရှိမှု, ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ၏။
အနုပညာရှင် Louis Bourgeois ၏ The Cells ပြပွဲကိုသင်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။ 10 a.m. ထံမှ 20 p.m. မှအင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေ။။ နှုန်းထားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
အရွယ်ရောက်သူ - ၈ ယူရို
အငြိမ်းစားယူသူ - ၇.၅၀
လူ ၂၀ ကျော်ပါဝင်သည့်အုပ်စုများ - € ၁၂ / လူတစ်ယောက်
၂၆ နှစ်အောက်ကျောင်းသားများ - ၇.၅၀ ယူရို
ပြတိုက်၏ကလေးများနှင့်သူငယ်ချင်းများ - အခမဲ့
Image - Maximilian Geuter
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ ဒီလတွေအတွင်း Bilbao ဒါမှမဟုတ်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင် Las Celdas ကိုမလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ သူမကသူတို့ကိုပြီးဆုံးသည့်အခါလစျြလြူရှုမထားခဲ့ဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ယနေ့အထိအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်သူတစ် ဦး သြဇာအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏အံ့သြဖွယ်အမှုအချို့။ ဒီပြပွဲကခင်ဗျားကိုတွေ့ခွင့်ရရင်မေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်ဟာဘဝနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းစဉ်းစားချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင် \_ t အကယ်စင်စစ်ပြတိုက်၌သင်ဖြုန်းသောအချိန်ကိုသင်အလွန်လျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းလိမ့်မယ်နီးပါးကသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » ဘေလ်ဘောင်မြို့ » Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်မှ Louise Bourgeois ၏ The Cells ပြပွဲ
သင် Galicia (၂) ကိုသွားလျှင်လုပ်ရန်အရာ ၂၀